Abakhiqizi bebhodlela lewayini & abahlinzeki - China Ibhodlela lewayini lewayini
Design ngokwezifiso 50ml 100ml 200ml 250ml 350ml 500ml ecacile ingilazi iwayini flat ibhodlela nge isivalo sensimbi
Ukusetshenziswa Kwezimboni: IVodka ﹑ whisky, brandy, gin, rum, utshwala ﹑ imimoya Base Material: Super Flint Ukubekwa uphawu Type: Cork MOQ: Isitsha esisodwa esingu-20 '(cishe ama-12870pcs) Ukuphathwa kwendawo kungangeza ukuphrinta kwesikrini, ukuwosa, ukuphrinta, ukugoba sandblasting, ukubaza i-electroplating nombala wokufafaza umbala ˴ njll. Umbala: Umumo ocacile noma owenziwe ngokwezifiso: Round, kepha noma yikuphi ukuma kungaba umkhiqizo: I-Sample Yekhasimende Elamukelekayo Isampula: Ukupakisha Okunikeziwe: Umbala we-Pallet noma owenziwe ngokwezifiso: Umbala Wendawo Yemvelo: I-Shandong, i-China OEM / I-ODM: Iyamukeleka
Intulo ibhodlela lewayini lengilazi
Sithokozela isimo esihle kakhulu phakathi kwabathengi bethu ngokuthengwa kwethu okuhle kakhulu, izinga lentengo elinolaka nokusekelwa okukhulu kwe-Ordinary Discount China Ibhodlela le-Glass elenziwe ngokwezifiso / i-Spirits Bottle / i-Wine Bottle / i-Vodka Bottle / i-Rum Bottle / i-Whisky Bottle / i-Liquor Bottle / Ibhodlela Lamanzi / Amabhodlela Engilazi, Ekuthengeni ukwandisa imboni yethu yamazwe omhlaba, ikakhulu sithola abathengi bethu baphesheya kwezimpahla zokusebenza ezisezingeni eliphakeme nokuxhaswa. Intengo ejwayelekile yase-China eyenziwe ngentengo ye-Glass Bottle ne-Spirits Bottle, Siwina amakhasimende amaningi athembekile ngokuhlangenwe nakho okucebile, ama-equipments aphambili, amaqembu anekhono, ukulawula ikhwalithi okuqinile kanye nensizakalo ehamba phambili. Singaqinisekisa zonke izinto zethu. Inzuzo nokwaneliseka kwamakhasimende ngaso sonke isikhathi kuyinjongo yethu enkulu. Kufanele uxhumane nathi. Siphe ithuba, sikunikeze isimanga.
amabhodlela e-vodka eshibhile e-wholesale amabhodlela ewayini elimhlophe
Ngokusebenzisa isikweletu sebhizinisi elincane elizwakalayo, umhlinzeki omuhle kakhulu ngemuva kokuthengisa nezinsiza zokukhiqiza zesimanje, manje sesizuze irekhodi eliyingqayizivele phakathi kwamakhasimende ethu emhlabeni wonke nge-CE Certificate China Nice Quality 700 Ml Whiskey Glass Bottles Spirit with Caps., Adhering kwifilosofi yebhizinisi 'yamakhasimende 1, qhubekela phambili', samukela ngobuqotho amakhasimende asendlini yakho naphesheya kwezilwandle ukubambisana nathi ukukunikeza ukusekelwa okuphumelela kakhulu! Isitifiketi se-China Ibhodlela le-Glass, i-Long Neck Glass Bottle, Emakethe ekhuphuka ngokuncintisana, Ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme yemikhiqizo kanye nedumela elifanelwe kahle, sihlala sinikeza amakhasimende ukwesekwa emikhiqizweni nakumasu wokufeza ukubambisana kwesikhathi eside. Ukuphila ngekhwalithi, ukuthuthukiswa ngesikweletu kungukuphishekela kwethu okuphakade, Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ngemuva kokuvakasha kwakho sizoba ngabalingani besikhathi eside.
Ibhodlela lewayini ibhodlela lewayini
JUMP kuyinto professional ingilazi ware nomkhiqizi iminyaka engu-20 nakho. Onguchwepheshe ukukhiqizwa amabhodlela ingilazi ehlukahlukene & ingilazi izimbiza. Ihlanganisa indawo engama-50000 m² futhi ibala abasebenzi abangaphezu kuka-500, ukukhiqiza amandla kungama-pcs ayizigidi ezingama-800 ngonyaka. Ngokuthuthuka kokusekelwa kwezobuchwepheshe kutholakale amabhodlela engilazi okuthekelisa nezimbiza zengilazi eYurophu, e-United States, eNingizimu Melika, eNingizimu Afrika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eRussia, e-Asia Ephakathi kanye nasemakethe yaseMpumalanga Ephakathi, lapho kuthokozela khona idumela elihle. Futhi unamagatsha eMyanmar ˴ Philippines ˴
Amabhodlela ewayini lengilazi ye-Champagne
Siphikelela ekunikezeni ikhwalithi enhle ngomqondo webhizinisi omuhle kakhulu, imali engenayo ethembekile kanye nosizo oluhamba phambili nolusheshayo. izokulethela hhayi kuphela umkhiqizo wekhwalithi ye-premium noma insizakalo nenzuzo enkulu, kepha mhlawumbe okubaluleke kakhulu imvamisa ukuhlala emakethe engapheli yamanani aphansi eChina 6 Ibhodlela Lewayini / Lebhiya Ikhadibhodi Lokupakisha, Ukuze ufunde kabanzi ngalokho esingakwenza yenzele wena uqobo, khuluma nathi noma kunini. Sibheke phambili ekwakheni izinhlangano zenhlangano ezinhle kakhulu nezesikhathi eside kanye nawe. Intengo ephansi ye-China Beer Box, Usayizi we-Beer Box, Ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo ngokukhetha abahlinzeki abahamba phambili, sibuye sisebenzise nezinqubo zokulawula ikhwalithi ezijulile kuzo zonke izinqubo zethu zokuthola. Okwamanje, ukufinyelela kwethu uhla olukhulu lwezimboni, kuhambisana nokuphathwa kwethu okuhle kakhulu, nakho kuqinisekisa ukuthi singazigcwalisa ngokushesha izidingo zakho ngamanani amahle kakhulu, kungakhathalekile usayizi we-oda.
Ibhodlela lewayini lengilazi elihlukile
Izinsiza zethu ezihlome kahle nokuphathwa okuhle kakhulu kuzo zonke izigaba zokudalwa kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka okuphelele komthengi ngamanani aphansi weChina Factory Supply Round White Frost Wine Glass Bottle ngeCork Stopper Gold Champagne Bottle Liquor Alcohol Spirit Vodka Vottle for Wholesale, We ' Bengithembekile futhi ngivulekile. Sibheka phambili ekuvakasheleni kwakho futhi wakhe ubuhlobo obunokwethenjelwa nobude besikhathi eside. Intengo ephansi yebhodlela lewayini elenziwe ngezifiso laseChina, Ibhodlela leBubbly, ngenxa yenkampani yethu ibilokhu iphikelela emcabangweni wokuphatha we "Survival by Quality, Development by Service, Benefit by Reputation". Sibona ngokuphelele ukuma okuhle kwesikweletu, izixazululo zekhwalithi ephezulu, inani elifanele kanye nezinsizakalo ezifanelekile yisizathu sokuthi amakhasimende asikhethe ukuthi sibe umlingani wabo webhizinisi lesikhathi eside.
Ibhodlela lewayini elibomvu lengilazi elibomvu
Umsebenzi wethu wesitolo unokosa, ukuphrinta, isithwathwa okubandayo, sandblasting, ukubaza, ukuqothula umbala kanye nokufiphaza umbala njll. Ibhodlela lomoya, ibhodlela lewayini, ibhodlela likabhiya, imbiza yengilazi, ibhodlela lesiphuzo, ibhodlela lokudla, amabhodlela ewayini akhethekile ahlukahlukene aphakathi naphakathi naphakathi, impahla eluhlaza okwesibhakabhaka, impahla eluhlaza okwesibhakabhaka, impahla ecwebezelayo ecwebezelayo noma impahla yengilazi yensengetsha, inkomishi yengilazi, ipuleti lesithelo ˴ umasoni imbiza, isiphuzo sokuphuza ibhodlela ˴ ingilazi yokuhambisa, ingilazi imbiza ehlukahlukene ingumkhiqizo wethu othandwayo. Futhi khiqiza ingilazi ephezulu ye-borosilicate engalingana kahle ngemicrowave nomshini wokuwasha, unokushisa okumelana nokushisa okungaphezu kwama-250 ℃. Inqubo yokukhiqiza eqinile inikeza isiqinisekiso sekhwalithi.
Amabhodlela engilazi ye-Champagne
Ukuqhubeka "ngekhwalithi ephezulu, ukulethwa okusheshayo, intengo yokuncintisana", sisungule ukubambisana kwesikhathi eside namakhasimende avela phesheya kwezilwandle nakwasekhaya futhi sithola ukuphawula okuphezulu kwamakhasimende amasha namadala. Umqondo wenhlangano yethu uthi "Ubuqotho, Isivinini, Umhlinzeki, Nokwaneliseka". Sizolandela lo mqondo futhi sizuze ngokwengeziwe ukwaneliseka kwamakhasimende.
Ibhodlela le-Sprite bottle whisky
Amandla: I-300ml, i-500ml, i-700ml noma i-Cap eyenziwe ngezifiso: I-Aluminium Screw Cap Logo: Ilogo Yekhasimende Elamukelekayo Umbala: Ukuphathwa kwe-Surface okucacile noma okwenziwe ngokwezifiso: Ukuphrinta kwesikrini, ukosa, ukuphrinta, ukubhoboza isanti, ukudweba, ukukopisha nokufaka umbala umbala, njll.
Isikwele Ibhotela Lamafutha Omnqumo, I-Olive Oil And Vinegar Glass Cruet, Imbiza Yokugcina Amafutha Olive, Ibhodlela Lamafutha Omnqumo, I-Olive Oil Bottle, 250ml Olive Oil Bottle,